ဦးနဝေငျးစတငျခဲ့တဲ့နိုငျငံခွားသားမုနျးတီးဆနျ့ကငျြရေးဝါဒကို တိုငျးပွညျခေါငျးဆောငျတှရေော မွနျမာနိုငျငံသားတှကေပါ ဆကျလကျကငျြ့သုံးနမေယျဆိုရငျ မွနျမာပွညျဟာကမ်ဘာပျေါမှာ ရှဆေ့ကျရပျတညျနိုငျဖို့ခကျခဲလာပါလိမျ့မယျ။
2014 Myanmar Census Report
After independent Myanmar census stories
In 1953 there was an attempt to take the first post-independence census by stages, stretching over the period 1953-55. The census of 1953 was successfully conducted in urban areas of that time. The census of 1954 covered only 15 percent of the rural population. (Ref. DoP Myanmar)
First Nation Wide Myanmar Census – 1973
Second Myanmar Census – 1983
After 25 years, Myanmar Census – 2008 (Myanmar Constitution)
And Myanmar Census Report– 2014
The Myanmar Population of year by Census and 2008 Myanmar Constitution
1973 = 28.92 million
1983 =35.3 million
2008 =57.5 million (By 2008 Myanmar Constitution)
2014 =51.92 million (By 2014 Myanmar Census Report)
How many populations different (between) during 2008 to 2014
= 57.5 Million (2008 Constitution) – 51.92 Million (2014 Census)
= 5.58 Million
(Where those people are gone? All of those people are died or other reasons? What happening in Myanmar during these years?) World populations are increasing years by years but Myanmar populations are lower than before during 2008 - 2014. What happening in Myanmar???
၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေသန်ခေါင်စာရင်း
လွတ်လပ်ရေးရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သန်ခေါင်စာရင်း နှင့် ခုနှစ်များ
လွတ်လပ်ရေးရပြီးအချိန်တွင် ပထမဦးဆုံး လူဦးရေသန်ခေါင်စာရင်း ကောက်ခံခဲ့သည်မှာ ၁၉၅၃ မှ ၅၅ အတွင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်း - ၁၉၇၃
ဒုတိယ ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်း - ၁၉၈၃
၂၅ နှစ်အကြာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ - ၂၀၀၈ ( နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ မှ ဖေါ်ပြချက်)
ပြည်လုံးကျွတ်သန်ခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ - ၂၀၁၄
၁၉၇၃ = သန်းပေါင်း ၂၉.၉၂ သန်း
၁၉၈၃ = သန်းပေါင်း ၃၅.၃ သန်း
၂၀၀၈ = သန်းပေါင်း ၅၇.၅ သန်း ( ၂၀၀၈ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အရ)
၂၀၁၄ = သန်းပေါင်း ၅၁.၉၁ သန်း
၂၀၀၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၄ ကြားကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်င့ လူဦးရေ ကွာဟချက်
= ၂၀၀၈ လူဦးရေးစာရင်း - ၂၀၁၄ လူဦးရေစာရင်း
= ၅၇.၅ သန်း - ၅၁.၉၁ သန်း = လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၅.၅၈ သန်း ကွာခြားချက်ရှိပါသည်။
ထို လူဦးရေ ၅.၅၈ သန်းမှာ မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိကြသနည်း။ ထိုမျှသော လူဦးရေမှာ သေကြေပျက်စီးကြခြင်းလော သို့တည်းမဟုတ် အခြားသော သိစ္စများရှိခြင်းလော။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၄ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပွားခဲ့သနည်း။ ကမ္ဘာလူဦးရေမှာ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တိုးပွါးလာပါသည် သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှု တိုးမသွားဘဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၄ အကြားတွင် လူဦးရေ ၅ သန်းကျော် လျှော့်နည်းနေသည်။ အဘယ်ံကြောင့်နည်း?
1. 2008 Myanmar Constitution.
2. 1973 Nation Wide Census Report
3. 1983 Nation Wide Census Report
4. 2014 Myanmar Census Report
5. DoP Myanmar ( Department of Population, Myanmar)
Dec 16, 2019 02:33 AM